Tekinoroji Haisi Kunonoka Kuderera ... er Flop! | Martech Zone
China, May 28, 2015 China, May 28, 2015 Douglas Karr
Gordon E. Moore ndiye mubatanidzwa weIntel uye Fairchild Semiconductor uyo akanyora pepa makore makumi mashanu apfuura ayo akafanotaura kupetwa kwechipiri kwenhamba yezvikamu padunhu rakabatanidzwa gore rega. Makore gumi gare gare, muna 50, akagadzirisa fungidziro kumakore maviri ega ega… uye fungidziro yake yanga yakanyatsoita. Zvino yava kuzivikanwa se Mutemo waMorey.
Kupa muenzaniso, iyo Apple Watch (iyo yandinofara uye ndinokurudzira) ine simba rekugadzirisa rinenge 2 iPhone 4 mafoni. Inotodarika iyo 1985 Cray-2 supercomputer… pachiuno chako. Ndiwo chaiwo mutambo wakapihwa tsoka yechiyero chose uye ndine nguva yakaoma kufunga kunyange Gordon Moore akafunga kuti tichava patiri nhasi.
Makomputa machipisi akaramba achiwedzera mashandiro paanenge achidzikira muhukuru, zvichibvumira hunyanzvi uhwo mainjiniya vasina kumbofunga kuti hunogona. Makore makumi mana apfuura, vanhu vazhinji vaisatenda kuti isu nekukurumidza tichava nekuwana ruzivo rusina muganho kubva muchanza cheruoko rwako.
Izvi zvinorevei kune vatengesi? IMO, zvinoreva kuti tiri pamatanho ekutanga ezvinogona kuitwa nemuchinjika-chiteshi kushambadzira optimization uye kushambadzira kufungidzira. Mazuva ano analytics mapuratifomu akanaka zvechisimba - kutora matani e data uye nekupa yakapusa kuzivisa Mahombe data masystem ari kufambira mberi kutyaira hunyanzvi muindasitiri yekushambadzira kufambisira mberi masisitimu einjiniya dzinofungidzira - izvo zvinozovandudza zvese ruzivo rwevashandisi nemhedzisiro yekushambadzira.
Simba rekugadzirisa rakakosha nekuti maturusi ekuvandudza pane aya mapuratifomu asingagumi anova nyore uye nyore kugadzira. Mumwe muenzaniso, kana kosi, ndiwo makuru data dhatabhesi injini. Nekuvandudza dhata yekuzvigadzirira uye injini dzemubvunzo, makambani anogona kusundira zviwanikwa zvekuvandudza kuvaka zvitsva - kwete kugadzirisa uye kugadzirisa dhatabhesi kuti imhanye zvakanyanya. Idzi inguva dzinonakidza!
Tags: moores mutemosimba rekugadzirisa